ရွာထဲမှ ကွန်မန်း လွယ်လွယ် ဖတ်နည်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanmar Gazette » ရွာထဲမှ ကွန်မန်း လွယ်လွယ် ဖတ်နည်း
ရွာထဲမှ ကွန်မန်း လွယ်လွယ် ဖတ်နည်း
Posted by ဆူး on Jun 8, 2011 in Myanmar Gazette | 14 comments
ရွာထဲမှာ တင်ထားတဲ့ ပိုစ်တွေ ဖတ်ပြီးသား ဖြစ်ပေမဲ့ တယောက်ယောက်က ကွန်မန်းပေးလိုက်ရင် ဘာ မန်းလိုက်လဲ သိချင် စိတ်နဲ့ တခုကို တခါစီ ထပ်နိပ်ပြီး ဖတ်နေရတာ ကွန်နက်ရှင် ကောင်းတဲ့ အချိန်ဆို မသိသာပေမဲ့ ကွန်နက်ရှင် မကောင်းတဲ့ အချိန်ဆို ကွန်မန်း တခု ဖတ်ရဖို့ စာတွေ အများကြီး တက်ဖို့ တော်တော် အချိန်စောင့်ရပါတယ်။
စာမျက်နှာ တခု ဖွင့်ရင်း ကြာနေတဲ့ အချိန်မှာ ကွန်မန်း ၃ ၄ခု လောက် ဆက်တိုက် တက်သွားရင် အမှီလိုက်ဖတ်ဖို့ တော်တော် လိုက်ရမလို ဖြစ်သွားပါမယ်။
ဒီတော့ လွယ်ကူမြန်ဆန် မန်းထားသမျှ အားလုံး တပြိုင်တည်း ဖတ်လို့ရအောင်
လင့်မှာ ၀င်ဖတ်ပါ။ ပိုစ်ကို ဖတ်ပြီးသား ဆိုရင်တော့ မန်းတာဖတ်ယုံပဲ ဆိုရင်တော့ အသုံးတည့်ပါတယ်။
ထိပ် နဖူးစီးမှာ အမဲ တန်းလေးမှာ comment ဆိုတာ ရှိပါတယ် အဲဒါကို နိပ်လိုက်ရင်လည်း စောစောက ပြောတဲ့ လင့်ကို ရောက်ပါတယ်။
ဟုတ်တယ်။တခါတလေ comment တွေက ပိုဖတ်ကောင်းနေတော့ အပြန်ပြန် ဖွင့်နေရတာနဲ့ တင် ရွာလည်နေ ရော။
အဲ့ဒါသိချင်နေတာနဲ့ ကွက်တိပဲ .. မမဆူး တော်တယ် …
အဲဒီလိုလုပ်ပြီး ကွန်မန်းတွေဖတ်ဖြစ်တာကြာလှပြီ … အားလုံး ဖတ်မိတယ် ဆိုပါတော့ … MG ကို မလွတ်တမ်း အားပေးနေတာလေ ….
ဆူးမမ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ပို့စ်ကိုဖတ်ပြီးလဲ ကွန်မန့်ဖတ်ချင်တာနဲ့ ပြန်ဝင်ဖြစ်တယ် အခုဆိုပိုအဆင်ပြေသွားတယ် တစ်ခုထပ်ပြောပြပါဦး Comment ဆိုတာထဲဝင်လိုက်တော့ စာတွေက လေးထောင့်ကွက်တွေပဲမြင်ရတယ် ပို့စ်ကျဖတ်လို့ရတယ် comment ထဲဝင်မှ စာဖတ်လို့မရတာ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ပြောပြပါဦး
လေးထောင့်ကွက် ဖြစ်တာ ဆူး ဆီမှာလည်း IE internet explore သုံးရင် အဲလို ဖြစ်ပါတယ်။
firefox သုံးရင်တော့ စာတွေ မြင်ရပါတယ်။ အိုင်အီး မှာ ဖြစ်တဲ့ လေးထောင့်ကွက် ကိစ္စကိုတာ့ ဆူး လည်း အခုထိ မရှင်းနိုင်သေးဘူး။ စာတွေ မြင်ရတဲ့ firefox နဲ့ပဲ ကြည့်ပြီး ဖတ်နေပါတယ်။
IE နဲ့ comment ထဲကိုဝင်ကြည့်တော့ စာဖတ်လို့ရပြီ IE သုံးရင် နဲနဲနှေးတယ် MG ထဲကိုဝင်နေရင်းနဲ့ ရပ်သွားတယ် တစ်ခါတစ်လေ ပို့စ်ပဲ ပေါ်တယ် ကွန်မန့်မပေါ်ဘူး refresh လုပ်မှ ပြန်ပေါ်တယ် သူကလည်း ဖုံးနဲ့ပတ်သတ်လို့နောက်ထားတဲ့ ကာတွန်းလေးလိုဖြစ်နေပြီ “မင်းလာခါနီး ငါ့ဆီကိုဖုံးဆက်လိုက် ဂျီကိုခေါ်လိုက် မရရင် ၄၅၀ ကိုခေါ် မရရင် ၈၀၀ ကိုခေါ် မရရင်…..” ဆိုတာလိုဖြစ်နေပြီ
IE မှာမြန်မာလို ပေါ်ချင်ရင်တော့ အောက်မှာပေးထားတဲ့ link လေးအတိုင်း follow လုပ်ရင် အဆင်ပြေမယ် ထင်ပါတယ် … ဒါမှ မရ ရင်တော့ software download လုပ်တုံးက IE မှာသုံးလို့ မရတဲ့ software ဖြစ်လို့ပဲ
မြန်မာလို ပေါ်ချင်ရင် Tool ထဲကနေ Setting မှာ မြန်မာဖောင့်ပြန်ချိန်းပြီး ဘလောက်ဇာကို resart ပြန်ချပြီး သုံးကြည့်ပါဦးရှင်
ပညာရှင်တွေတော်ကြတယ်ဗျာ ကျနော်တို့စာရိုက်တာကလွဲပြိး ဘာမှမတတ်ဘူး …
ဆက်ပြီးလဲဒီထက်ဒီထက်တော်အောင် ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေ …….
သာမန်မဟုတ်ဘဲ ပေါက်ပေါက်မြောက်မြောက်ဇြစ် သွားအောင်တော်ကြပါစေ …
ရသင့်တဲ့ ၀င်ငွေလဲရအောင် ကြိုးစားကြပါ တီထွင်ကြံဆကြပါလို့ ……………
တော်တော် လည်တဲ့ ဆူး။
အချင်းချင်း ဆရာမကြီးလုပ်ပြီး ပို့စ်တင်လိုက်သေးတယ်။
ဦးလေးရေ.. ဆူး ဒီပိုစ် တင်တာ မသိတဲ့ လူတွေ အတွက် တင်ပေးတာပါ.. ဒီလို လုပ်ပြီး ကြည့်နေတာ တော်တော် ကြာနေပါပြီ။ အခုမှ သိလို့ အခုမှ တင်ပြီး ပြောနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဂျီတော့မှာ သူငယ်ချင်းတွေကို လက်တို့ပြီး ပြောပြ ထားပြီးသားပါ။ နှေးလွန်းတဲ့ လိုင်းကို အသုံးပြုနေရတဲ့ ရွာသူ ရွာသားတွေ အတွက် လမ်းညွန်တာပါ။
အေးလေ။ အောင်မငီး ကျေးဇူးကြီးလှပါပေ့ ။ ကျေဇူးပါခည။
မမဆူး… တကယ့်ကို လက်တွေ့မှာ အသုံးဝင်ပါတယ်… ကျူးဇေးဗျ…:P